जनताले ज्ञानेन्द्रलाई झैँ ओलीलाई पनि गलहत्त्याउँछन्ः पुन - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com जनताले ज्ञानेन्द्रलाई झैँ ओलीलाई पनि गलहत्त्याउँछन्ः पुन - खबर प्रवाह
जनताले ज्ञानेन्द्रलाई झैँ ओलीलाई पनि गलहत्त्याउँछन्ः पुन
काठमाडौं। नेकपाका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा, स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतालाई अदालतले सही ठहर्‍याउन नसक्ने बताएका छन्। आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा पुनले भने, ‘न्यायपालिकाले ओलीको कदमलाई बदर गरेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्छ। यो कदम सच्याउनुको विकल्पै छैन। संविधानले त्यसै भन्छ।’
ओलीको अलोकतान्त्रिक र निरंकुश कदम सडकबाटै सच्याउन बाध्य पारिने उनले बताए। ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुशता जनताको शक्तिका अगाडि नटिकेको चर्चा गर्दै उनले ओलीको निरंकुशता धेरै दिन नटिक्ने दाबी गरे।
‘देशव्यापी पञ्च र्‍यालीमा जाँदा ज्ञानेन्द्रलाई लाखौंले ढोगेका थिए। उनले टेकेको माटो टिपेर मानिसहरूले घर लैजान्थे। ज्ञानेन्द्र ‘बुझेँ-बुझेँ’ भन्दै हिँड्थे। त्यस्ता ज्ञानेन्द्रसमेत जनताका अगाडि टिकेनन्,’ उनले भने, ‘अहिले ओलीले ज्ञानेन्द्रको जस्तै पञ्च र्‍याली गरेका छन्। जनता धेरै सचेत भइसकेको छ। जनतालाई हेप्नेहरू इतिहासबाट गलहत्त्याइएका छन्। ओलीलाई पनि जनताले एक दिन ज्ञानेन्द्रलाई जसरी गलहत्त्याउँछन्।’
ओलीले आफू कामचलाउ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कामचलाउ मन्त्री नियुक्त गरेको र केही माओवादी जनयुद्धबाट र झापा आन्दोलनको क्रान्तिकारी विरासतबाट आएका मानिसहरू पनि ओलीको मन्त्री खान दौडिएको भन्दै उनले व्यंग्य गरे।
‘आयु सिद्धिएको कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको पनि कामचलाउ मन्त्री खान केही साथीहरू दौडादौड गरेको देखियो। यो कस्तो स्वाभिमान ? कस्तो विचार ? कस्तो संस्कृति ?,’ पुनले भने, ‘यो दलाल तथा नोकरशाही प्रवृत्ति हो, बिचौलिया प्रवृत्ति हो। ओलीजी र उहाँको गुटले जे आउँछ खान्छ, जे पाउँछ खान्छ। जायज-नाजायज सही-गलत केही मतलब गर्दैन।’
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदैनः अर्थमन्त्री पौडेल
झाँक्रीको आव्हान: प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई बहिस्कार गरौँ